Ukuphupha ngomntwana omncinci Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Abantwana abaphakathi kweminyaka emibini ukuya kwemithandathu badla ngokubizwa ngokuba ngabantwana abancinci. Kule minyaka, amantombazana namakhwenkwe ayaqhubeka nokuxhomekeka kubazali babo okanye kubafundisi-ntsapho, kodwa amaxesha amaninzi sele befundile ukubaleka, ukutya bodwa, ukwenza iminqweno besebenzisa ulwimi hayi ukubacaphukisa.
Olu phuhliso luqinisekileyo, kodwa ukongamela umntwana omncinci nako kunokuba nzima kwaye kufuna ingqalelo enkulu. Eli nqaku linokudlala indima xa umntwana omncinci evela emaphupheni. Kodwa ichazwa njani ngokuchanekileyo njengomfuziselo wephupha?
1 Uphawu lwephupha «inkwenkwana» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «inkwenkwana» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «inkwenkwana» - ukutolika ngokomoya
Uphawu lwephupha «inkwenkwana» - ukutolikwa ngokubanzi
Inkwenkwana ithembisa izinto ezintle ephupheni xa ibonwa ichwayitile, bonwabile kwaye bonwabile. Ngokoluvo ngokubanzi, oku kubonisa ukuqala kwe isigaba esitsha sobomi lowo mntu unomdla uvulekileyo kuye. Emva kwephupha, uhlala ebonakalisa ukuba ingaba unokuba naye na umntwana kungekudala kwaye iphupha eli liqikelelo.
Inokuba kunjalo, kodwa umntwana omncinci akanyanzelekanga ukuba abekho. Utshintsho kubomi bephupha linokunxulunyaniswa nomsebenzi wemihla ngemihla, ubudlelwane bakho okanye ubudlelwane nabahlobo. Unokuhamba okanye ufumane into entsha oyithandayo.
Kwelinye icala, umntwana obonwe ephupheni ulusizi, akonwabanga okanye uyagula umfana, mhlawumbi ukwabethwa ngamadolo, oku akucebisi utshintsho oluqinisekileyo kodwa kukuba iphupha livumela izigqibo ukuba zitsalwe ngobuntu umfazi. umntu ekuthethwa ngaye.
Umntwana omncinci kule meko ufuzisela u ukuzijongela phantsi Amaphupha, kunye nobunjani bomntwana, anokuqinisekiswa kuphela kubomi bemihla ngemihla, akakakhuli kwaye uxhomekeke kwabanye. Kuya kufuneka uzame ukusebenza ngokuzithemba kwakho kunye namandla akho kwabanye.
Ukuba umntu utyiwa ngecephe ephupheni njengomntwana omncinci, oku kungabonisa impembelelo yomnye umntu ebomini bokuvuka.
Uphawu lwephupha «inkwenkwana» - ukutolikwa kwengqondo
Umntwana omncinci obonwa ephupheni uhlala efuzisela umbono wengqondo. isicelooya ngqo ekuphupheni. Ukuba ngenene ungutata ebomini bokwenyani, iphupha elo lingangumqondiso wokuba engazi ngokungazi ukuba akakhathali ngokwaneleyo ngomntwana. Kuya kufuneka uzame ukuyihoya ngakumbi kwaye uhlakulele inkathalo yothando. Kubalulekile ukuba wazi uxanduva lwakho.
Nangona kunjalo, ukuba iphupha alinabo abantwana, uphawu "inkwenkwana" lunokubhekisa kwezinye iindawo zobomi ahlala kuzo ixesha elincinci kakhulu. Ubuhlobo bunokuba kwinqanaba lokuqhekeka okanye a ikameru ubunzima ngenxa yokuba lo mntu kuthethwa ngaye akakhathali ngokwaneleyo kwaye akabonisi uxabiso olwaneleyo kwabanye abantu.
Kungenzeka nokuba kukungakhathali kubomi bakho bobuchwephesha okanye ngokunxulumene nokuzonwabisa kwakho.
Uphawu lwephupha «inkwenkwana» - ukutolika ngokomoya
Kwinkcazo yamaphupha okomoya, umntwana omncinci umele elinye ephupheni. Isiqalo esitsha ngendlela efanelekileyo.